पूर्ण इतिहास लिन सके हुन्छ रोगको निदान: निक साइमन्स इन्स्टिच्यूट
पूर्ण इतिहास लिन सके हुन्छ रोगको निदान
13 Sep, 2016 By: दल बहादुर जि.सी.
२०६८ सालको आश्विन महिनाको एकदिन म OPD मा बसेर बिरामी जाँचिरहेको थिएँ । २४ बर्षको कल्पना राना नामकी एकजना युवती OPD मा आईन् र निकै निराश हुँदै “सर, म त मर्छु होला, मलाई अब सन्चो हुँदैन होला” भन्दै लामो श्वास तान्दै मेरो छेवैमा बसिन् । मैले उनितिर फर्केर किन, के भयो र, भनि सोधें । उनको हातमा एउटा फाइल थियो जसमा उनले धेरै अस्पतालहरुमा जाँच गराएर औषधी खाएका रिपोर्टहरु राखिएका थिए ।
म उनको History लिँदै थिए । उनको भनाइमा उनलाई विगत डेढ वर्ष देखि खाना खान मन नलाग्ने, जतिखेर पनि जाडो भइरहने, दिक्क लाग्ने, एकान्तमा बस्न मन लाग्ने, निराश मात्र लागि रहने, शरीरका सबै जोर्नीहरु तथा शरीर दुख्ने, बढी थकाई लाग्ने, काम गर्न मन नलाग्ने, निंद्रा बढी लाग्ने, शरीर कमजोर भएको महसुस हुने, जतिखेर पनि सुतिरहुँ जस्तो लाग्ने, र आजभोली मोटाएको महसुस भएको बताइन् ।
त्यसपछि मैले उनको physical examination गर्न सुरु गरे । उनी aneamic देखिन्थिन, उनको शरीरमा non-pitting type को oedema थियो । उनको face फुलेको जस्तो देखिन्थ्यो । उनको घाँटी पनि हल्का सुनिएको जस्तो देखिन्थ्यो । उनको BP 100/70 थियो र pulse rate ६० b/min थियो । साथै उनको आवाजमा सामान्य परिवर्तन भएको थियो ।
मैले उनका पहिलेका अस्पतालहरुका रिपोर्टहरुलाई अध्ययन गरे, कतिपय ठाउँमा उनलाई Depression Diagnosis गरि औषधि दिइएको रहेछ भने कतिपय ठाउँमा Arthritis Diagnosis गरिएको रहेछ । तर औषधिले कुनै काम नगरेको कुरा उनले बताइन् । मैले उनको पूर्ण History लिइसकेपछि र Physical Examination गरिसकेपछि यो कुनै Depression वा Arthiritis नभई, यो त Hypotheriodism हुन सक्दछ भनि Provisional Diagnosis गरि TFT गर्नको लागि मिसन अस्पताल पाल्पा, जहाँबाट मैले MLP तालिम लिएको थिएँ, त्यहाँ Referral Letter लेखि बिरामीलाई पठाएँ । साथै मैले त्यहाँ डाक्टरलाई पनि फोन मार्फत माथि उल्लेखित बिरामीको संक्षिप्त इतिहास बताइदिएँ र राम्रो उपचारको लागि अनुरोध समेत गरें । सो बिरामी पाल्पा गएर Referral Letter देखाएपछि त्यहाँपनि सोही अनुसार TFT गरिदिनु भएछ । TFT को Report मा Thyroxin level घटेको रहेछ र मिसन अस्पताल पाल्पामा पनि Hypotheroidism नै Diagnosis भएछ । त्यहाँबाट फर्किएर कल्पना राना मलाई भेट्न आइन् र भनिन्, “सर तपाइले जे भन्नुभएको थियो, त्यहाँ पनि त्यही भन्नुभयो भनेर औषधी र रिपोर्ट देखाईन् । त्यहाँ Thyroxin Hormone ५० mg/day को दरले ४ हप्तासम्मलाई दिएर, ४ हप्तापछि follow-up को लागि बोलाएको रहेछ । अहिले उनको स्वास्थ्यमा पूर्णरुपमा सुधार आएको छ ।
मैले MLP तालिममा सिकेको पूर्ण History Taking र Physical Examination को कारणले गर्दा डाक्टरहरुले जाँच गर्दा छुटाएको कुरा समेत थाहा पाउन सकें, जसको कारणले गर्दा कल्पना रानाको रोग समयमानै निदान गरी निको हुनसक्यो । त्यसैले पूर्णरुपमा History Taking गर्नसकेमा रोग निदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
दल बहादुर जि.सी.
सि.अहेव, बामीटक्सार स्वास्थ्य चौकी